Mafotaka ny adin’ny media ao Kiobà momba ny adin’i Rosia sy Okraina · Global Voices teny Malagasy
Mafotaka ny adin'ny media ao Kiobà momba ny adin'i Rosia sy Okraina
Handona tanora amin'ny alàlan'ny media sôsialy no laharam-pahamehan'ny fitondràna kiobàna
Nandika (en) i Alicia
Voadika ny 13 Avrily 2022 16:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, عربي, українська, Español
Sary natao ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe (CC0 1.0)
Mpanoratra tsy nitonona anarana ao Kiobà no nanoratra voalohany ity lahatsoratra ity, tamin'ny fampiasàna ny solonanarana Luis Rodriguez.
Tsy nahagaga ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena ny fananiham-bohitra nataon'i Rosia tao Okraina. Ny fihenjanana mbola misy ankehitriny eo amin'ireo firenena roa tonta tato anatin'ny taona vitsivitsy dia efa afaka nitarafana ny zavadoza ho avy: ny herisetran'ilay matanjaka ataony amin'i Okraina. Na izany aza, ery amin'ny lafy ilan'i Pasifika, ao Kiobà, lavitra be an'i Eorôpa, misy ady ifanaovan'ny media mba ho entina manamarina ny fanohanan'ny governemanta kiobàna an'ilay mpanani-bohitra.
Na iza na iza ka mahalàla ny fifamatorana ara-tantara nisy teo amin'ny Firaisana Sôvietika fahiny sy Kiobà, dia mety tsy ho gaga hoe hatramin'ny nihamafisan'ny fifandonan'i Rosia sy Okraina, nanohana ny pôlitikan'i Vladimir Putin i Kiobà. Tsy resaka jeopôlitika fotsiny ny anton'ny fanohanan'i Kiobà, fa noho ny antony mitodika kokoa amin'ny zavamisy ihany koa; tototry ny trosa ara-bola tsy hita noanoa manoloana an'i Rosia ilay firenena tato anatin'ny taompolo vitsivitsy farany.
Andro vitsivitsy nialoha ny fananiham-bohitr'i Rosia tao Okraina, nitsidika ilay nosy ireo mpikambana ao amin'ny Domà -mpanjakàna Rosiàna, nahitàna ny praiminisitra lefitra, Yuri I. Borisov sy ny mpitondra tenin'ny Domà, Voldin Vyachaslar, ary nanitatra ho hatramin'ny 2027 ny fotoana fandoavana ny trosa, izay heverina ho 2,3 lavitrisa dôlara amerikàna amin'izao fotoana izao, nomena ity firenena ao Karaiba ity teo anelanelan'ny 2006 sy 2019.
Tsy misy hafa amin'ireo firenena hafa ao amin'ny faritra, toa an'i Nikaragoà sy Venezoelà, ny firenena kiobàna dia tsy nanohana ireo maro an'isa Amerikàna Latina mpifanolo-bodirindrina aminy, izay nanameloka ilay fananiham-bohitra ary nandà ny tsy handatsa-bato tamin'ny fanapahankevitra ho fanamelohana ilay fitsabahana ara-miaramila.
Hatramin'ny nanombohan'ny ady, nisy fifanandrinana nivantana teo amin'ny firesak'ireo media mpomba ny governemanta kiobàna sy ireo media tsy miankina izay mitombo be tokoa any amin'ireo nosy (na maro amin'izy ireny aza no miaritra ny fibahanana azy ireo tsy ho afaka hiditra amin'ny aterineto).
Raisin'ny fanjakàna kiobàna ho toy ny faritra stratejika iray fitarihan-kevitra ny media, indrindra fa nanomboka tamin'ireo fihetsiketsehana tamin'ny 27 Novambra 2020, ary ireo hetsipanoherana tamin'ny 11 Jolay 2021. Ireo tambajotra-na media sôsialy, indrindra fa ny Facebook manokana, dia sehatra iray lavitry ny fifehezan'ny governemanta, saingy tato anatin'ny taona vitsy lasa, ny fanjakàna dia niantehitra tamin'ireo mpanao gazety sy tomponandraiki-panjakana miseho ho “mpitarik'hevitra,” izay ny iraka ampanaovina azy dia ny hitantana ady ideôlôjika iray.
Amin'io fomba io, ny fakàna am-bavany, sy hatramin'ny ankamely koa aza, dia ampahany tamin'ireo “cyberclarias,” fomba fiteny avy amin'ny trondro iray heverina ho mpihaza, hita any amin'ireo farihy ao amin'ny nosy, ary manondro ny teninjatovo kiobàna hilazàna ireo olona izay mamorona kaonty fako ety anaty tambajotra mba hanohanana ny fitondràna. Ny fitoviana dia mifototra amin'ny zavamisy hoe ny iraka ampanaovina an-dry zareo ety anaty tambajotra dia ny hifanandrina amin'izay rehetra manana fijery mifanohitra amin'ny an'ny fitondràna ao Kiobà.
Taorian'ilay fananiham-bohitra, maro tamin'ireo mpisehatra amin'ny pôlitika no niditra tamin'ny fanandramana hanamarina ilay fananiham-bohitra. Lasa bolokin'ireo media ofisialin'ny governemanta kiobàna sy rosiàna izy ireny. Ny fitantaràna fototra ho azy ireny dia ny hoe i Etazonia sy ny OTAN no tomponandraikitra feno, tsy misy fanamelohana na kely aza ny fampiasàna hery nataon'i Rosia. Mifanaraka amin'ny fitantaràna avy amin'ny governemanta rosiàna, avadik'ireo “cyberlarias” ho ara-drariny ilay “hetsika manokana ara-miaramila,” tohanana amin'ny filazàna azy ho “fanilihana ny nazi” ao Okraina sy ho fiarovana ireo faritra fonenan'ireo teratany rosiàna. Ny tena zavamisy dia, fananiham-bohitra atao amina firenena iray manana ny fiandrianany io.
Raha atao hoe marina fa misy vondrona nasiônalista avy amin'ny elatra farany havanana ao Okraina, tsy afaka ny hohamarinina mihitsy ny fitsabahana tahaka izany. Maro avy amin'ireny fampitam-baovao avy amin'ny governemanta ireny no ninia tsy nahalala ireo sivily maro niharam-pahavoazana sy ny faharavàna nanjo ireo fotodrafitrasa ao amin'ny firenena hatramin'ny nanapahan'ny Rosiàna hevitra hanani-bohitra.
Ao anatin'ireo olona maro mirona amin'ny fanamarinana ny resaky ny Rosiàna ilay mpanoratra, Sandra Guerra Maseda, izay tena navitrika be tokoa tao amin'ny Facebook momba io zavatra io. Izy dia mpandray anjara ao amin'ilay media nomerika mpanohana ny governemanta kiobàna Cuba debate, izay heverina ho singa iray stratejika ao anatin'ny adin'ny media kiobàna. Ifampizaràny ihany koa ny fomba fijerin'ilay orinasa maro rantsana “Telesur,” mpifanome tànana amin'ny governemanta kiobàna amin'ny resaka fifandraisana.
Ity ny ohatra iray amin'ny fomba izaràn'i Kiobà ireo fitantaràn'i Kremlin, tsy asiana famakafakàna sy tsikera:
Maribolana: Nampangain'i Rosia i Etazonia ho nikasa ny “hitarika asa fikarohana momba ireo sela mpitondra aretina hita anatin'ny vorona, ramanavy ary biby mandady ao #Okraina ho an'ny taona 2022, ary hatramin'ny “mety ho fanelezana ny pesta mpahazo ny kisoa afrikàna sy ny anthrax.”
Isan'ireo hafa mpanao gazety mavitrika sy mifandray amin'ny governemanta ilay mpikirakira vaovao Ida Garberi, sy Orestes Gonzalez, izay miasa ho an'ny Cuban News Agency (Masoivohom-Baovao Kiobàna), ary i Manuel David Orrio, Kiobàna mpitsikilo fahiny izay niasa an-tsokosoko nandritra ny taona marobe tamin'ny fitsofohana tamin'ny asa fanaovana gazety tsy miankina.
Nanamafy ny fitantaràn'ireo mpomba an'i Rosia ny fahitalavitra. Ny fandaharana Con Filo, alefa amin'ny alina, dia natao ho an'ireo tanora, ary mpanao gazety tena mbola tanora no manentana azy, izay manana fironana mankany amin'ny fampiasàna fomba firesaka sy fifandraisana manokana amin'io sehatra manandanja ao anatin'ny fiarahamonina kiobàna io.
Midika fiovàna tetikady io fandaharana vaovao io mba handonana ireo tanora, sehatra iray heverin'ny fanjakana kiobàna ho tena laharampahamehana ao anatin'ny ady ideôlôjika ataony, satria izy io no tsy tena afa-po amin'ny ideôlôjia ofisialy no sady mpilalao fototra anatin'ireo hetsipanoherana nitranga tao Kiobà tato anatin'ny taona vitsy farany.
Ao anatin'ny vanimpotoanan'ny aterineto, tsy misy izany ampira tsy refesi-mandidy izany ka hihemotra amin'ny fanapempoana na fanandramàna hifehy ny tambajotra sôsialy. Kanefa, nisedra fanoherana teny anaty tambajotra sôsialy ny fitantaràna ofisialin'ireo mpomba an'i Putin ao Kiobà, toy ny an'ilay mpanao gazety Mauricio de Miranda Parrondo, izay nanakiana an'i Rosia ho toy ny “ampira iray hafa,” na Elaine Diaz, mpanorina ny Periodismo de Barrio, izay mizara ny zavamisy momba ilay ady tao amn'ny kaontiny Twitter.
Ao anaty tontolo iray izay ifanjevoana hery imperialy marobe, aleoko miampanga ny imperialisma rehetra ary indrindra fa ny ady mperialista, toy izay hanohana ampira iray mifandona amina iray hafa.
Mivoaka ao amin'ny La Joven Cuba ny lahatsoratro androany “Rosia: ilay imperialisma iray hafa”.
Misy ireo Kiobàna mpisera anaty aterineto izay, toa ahy, mitady vaovao marina avy amin'ireo media iraisampirenena toy ny CNN, El Nuevo Herald ary The Washington Post (Ilay Kiobàna mpamakafaka an-gazety Abraham Jiménez Enoa dia miasa ho an'ity farany ary mandrehitra adihevitra). Ao amin'ilay nosy, misy ny OnCuba ary koa ireo fantsona media voabahana, toy ny Cadal, CiberCuba, ADN, sy ny 14ymedio, izay ilay bilaogera Yoani Sánchez sy ny vadiny, ary i Reinaldo Escobar mpanao gazety miasa tena, no mandrindra azy. Ao anatin'ity bitsika manaraka ity, kianin'i Sánchez ny fandrakofana nataon'ny Granma, gazety mpomba ny governemanta:
El diario ‘Granma’ se supera a sí mismo en niveles de abyección… el órgano oficial del Partido Comunista #cubano ha echado mano de todo tipo de fórmulas para no llamar a las cosas por su nombre, para no decir “invasión rusa a Ucrania”. pic.twitter.com/p3vyPY0TuD
— Yoani Sánchez 🇨🇺 🇺🇦 (@yoanisanchez) March 2, 2022
Nihoatra ny faratampony tamin'izay fanaony ny gazety ‘Granma'… nampiasain'ilay rantsana ôfisialin'ny antoko kaominista kiobàna daholo izao karazana raikipohy rehetra izao mba hialàna amin'ny fiantsona zavatra iray amin'ny tena anarany, mba hialàna amin'ny fitenenana hoe “Fananiham-bohitra Rosiàna ny ao Okraina”.
— Yoani Sánchez 🇨🇺 🇺🇦 (@yoanisanchez)
Arakaraky ny ivoaran'ny toedraharaha ao Okraina, mitohy ihany koa ny fizarazaràn'ireo media kiobàna: ny tolona ho fampiroboroboana ny marina momba io ady tsy rariny io izay manohintohina ny fandriampahalemana eran-tany.
Raha te-hahazo vaovao misimisy kokoa momba io lohahevitra io, jereo ny fandrakofanay manokana ny Rosia manani-bohitra ao Okraina.
Kolombia 5 andro izay